Carrots "Shantane 2461": nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche, karịsịa nsị - Karọt iche - 2019
Uru na ọghọm dị iche iche
Nhọrọ dị iche iche
Ụdị "Shantane" na-eri nri site na nhọrọ na njikọ nke ụdị French. Ụgbọ ala a ghọrọ nna ochie nke otu ụdị nke oge a, ndị nnochite anya ya nwere ọtụtụ ụdị. Ezigbo ncha na ọbụna, ihe na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke (13-14 cm) nke ọdịdị cone-dị ka ọdịdị nwere ntutu isi na mkpịsị aka. Mkpokọta rosette nke na-agba gburugburu na-enweta ezigbo ike. Anụ nke carrots dị nnọọ osere na oke, ebe isi ihe dị na ya bụ ihe na-enweghị atụ. The sugar content is 10%, nke na-eme carrots ụtọ zuru ezu. Kwa 100 g nke akụkọ ọhụrụ pulp ruo 25 mg carotene. Ụdị a na-anọchite anya ọtụtụ ndị mbụ na-ajụ F1 hybrids, nke na-eme ka o kwe omume na-eto eto carrots n'ọtụtụ ọnọdụ ihu igwe.
Oge ịgba chara acha bụ site na 90 ruo 130 ụbọchị. Ihe dị iche iche bụ elu mkpụrụ. Dabere na ihu igwe na ụdị dị iche iche, "Shantane" sitere na 6-10 kg / m².
Ọ dị mkpa! Na ihu igwe dị mma na agrotechnology, ihe ndị dị n'oge karọt "Shantane" enwere ike itolite n'ubi ahihia, nke ga eme ka ihe ubi abuo kwa afo.
Ọdịdị nke ụwa dị otú a na-enye ohere iji carrots na ụzọ dịgasị iche iche - na-eri nri ọhụrụ na-emetụ ihe, na-atụgharị na canning. Ụdị dịgasị iche iche dị mma, dịka ọhụụ nke pasent dị ala nke branched, nke mebiri ma ọ bụ gbawara.
Iche iche "Shantane" nwere ọtụtụ àgwà dị iche iche na-egosi ọdịiche dị na karọt a site na ọtụtụ ndị ọzọ. Ụdị a bụ otu n'ime usoro kachasị na mbido nke mbụ, ebe ọ na-adịghị achọ nlekọta ụbọchị ọ bụla na nlekọta. Iguzogide tsvetushnosti na ọrịa dịgasị iche iche na-enye "mgbochi" mgbanwụ ọkụ ọkụ, nke na-enye gị ohere ịmalite ịmalite dịgasị iche na ala dị iche iche na ọnọdụ dịgasị iche iche ihu igwe. A na-echebe Carrots maka nchekwa ogologo oge, ebe ha na-enwe ike ịnọgide na-enwe ọdịdị dị mma ruo ọnwa asatọ. Ka o sina dị, ọ bịara bụrụ na carrot bụkwa nke zuru oke iji mee ihe ọhụrụ, ebe ọ bụ na ha dị ụtọ, na-esi ísì ụtọ ma dị ụtọ.
Ị ma? Ịga n'ihu na-eri ọtụtụ carrots nwere ike ịgbanwe akpụkpọ anụ mmadụ na-acha odo odo.
N'ileba anya n 'oke nkpuru nke di iche iche - rue 10 kg / m², onye nwere ike ikwu banyere onodu aku na uba na oke nke oke a. Nke a na-akwado njupụta nke mgbọrọgwụ ahụ, nke na-adịghị adị mfe na mgbawa na mmebi.
Nri akwukwo ahihia nile, ihe odide di iche iche nke Shantane, abughi ihe ozo; ha choro ala ndi na agbapu, ndi na-edozi elu, nke nwere oke ikuku. A na-akụ ya n'ala mgbe kabeeji, eyịm na tomato. "Shantane" na-agbanwekwa ala na ala dị elu.
Maka owuwe ihe ubi na-amị mkpụrụ karị, a ghaghị iji nri fatịlaịza mee ihe maka ịgha mkpụrụ: nke mbụ, a na-eji nri fatịlaịza eme ihe, a na-ejikwa nri ndị e ji esi nri eme ihe n'oge e guzobere ihe ọkụkụ. Ọ dị mkpa ka carrots dị mkpa ugboro abụọ ka anya dị n'etiti mgbọrọgwụ n'ọdịnihu dịkarịa ala 6 cm. Dabere n'ụdị ndị nnọchiteanya nke ụdị dịgasị iche na oge chara chara.
Ọ dị mkpa! Karọt "Shantane" - Otu n'ime ụdị ole na ole nwere ike ịmalite dịka ihe ọkụkụ n'oge okpomọkụ, na nchekwa nchekwa ruo oge mmiri.
Ugboro ugboro, a na-eji ụdị a dịka ịgha mkpụrụ maka oyi, ebe ọ na-edozi ụdị okpomọkụ dị iche iche na-adabaghị na ntu oyi.
Iji nweta ihe ubi dị mma nke mara mma, nke na-esi ísì ụtọ, carrots dị ụtọ ma na-edozi ahụ, ọ dị mkpa iji nụcha ihe ọma na ilekọta ihe ọkụkụ a. Mgbe ị na-agbaso ndụmọdụ ndị a na-atụghị anya ya, ị nwere ike ịkwado mmepe nke ọdịbendị n'oge nile nke ahịhịa:
A ghaghị igwu ala mgbe ọ kpọrọ nkụ, nke ga-enyere aka zere ara.
Ihe omimi nke igwu ala kwesiri ibu 25-30 cm, nke geme ka nkpọrọgwu di nma.
E kwesịghị ịgha mkpụrụ osisi na ala ọgbara ọhụrụ iji zere ihe siri ike, mgbọrọgwụ isi mgbọrọgwụ.
Ọ ka mma kụrụ na osisi na e nyere ahịrị, na a anya nke 5-7 mm, na anya n'etiti ahịrị kwesịrị 35-40 cm.
Ọ dị mkpa ka mkpa na seedlings ma stably ịnọgide na-enwe ala mmiri.
A ghaghị ịkwanye osisi ndị a tụgharịrị echepụta ka ugbo karọt ghara imebi mkpụrụ osisi ahụ.
Na-eto eto akwukwo nri kwesiri igbasa ya.
Dị ka akụkụ nke nlekọta nke ụdị "Shantana" a ga-ekewa n'ime ụzọ abụọ: ịgbara na fertilizing.
A na-eme mkpuru osisi na-eto eto 1-2 ugboro n'izu. Ọ dị mkpa imefu ruo 4 lita mmiri kwa 1 square mita. Mgbe a na-emepụta ihe ọkụkụ dị mkpụmkpụ, ọnụego nke atọ kwesịrị ịdị na-ebelata 1 oge kwa izu, ma ọnụego oriri mmiri kwesịrị ịdị okpukpu abụọ site mita 1.
Ị ma? Karọt bụ ihe ntanye. Karọt mgbọrọgwụ zuru oke ọcha nha enamel, na-emepụta chịngọcha ịhịa aka n'ahụ, na-egbochi ihe omume nke caries.
Mgbe enwere ihe ngbochi nke ihe ubi, mmiri ozuzo niile adighi abia, mmiri kwesiri ka a mee ya kwa ubochi iri na abuo, ma rue 10 lita mmiri kwesiri iji ya 1 mita.
A ghaghị ime nri nri isi n'ime izu ole na ole mgbe mbụ ma ọ bụ germination. Na ịwụ mmiri, ị ga-ewere 1 teaspoon nke potassium magnesia na urea, 1 tablespoon nke superphosphate. Nwezi nke abụọ ga-eme izu ole na ole mgbe nke mbụ gasịrị: ọ dị mkpa iji nri fatịlaịza siri ike - "Nitroammofosku" na "Nitrophoska", maka ịwụ mmiri 1 - 2 tablespoons nke fatịlaịza.
Ihe mgbakwasa nke atọ Ọ na-emepụta site na ngwọta nke ndị nkịtị uyi. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ dị mkpa ka ifatilaiza ala na potassium sulphate, nke na-ebelata ọnụ ala nitrates.
Ọ dị mkpa! Achọpụta mkpụrụ na foliar nke ọma na mmiri boric dị ka ezigbo gram nke 10 lita mmiri.
Onye iro kachasị nke akwụkwọ nri akwụkwọ bụ ụgbọ efere. Ọnụnọ nke parasaiti a nwere ike kpebisie ike site na mpempe akwụkwọ gbagọrọ agbagọ. Ma ọ bụrụ na a na-elekọta nke karọt ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ofufe ahụ agaghị enwe ike imeri ihe ọkụkụ ahụ. Ọtụtụ mgbe, ọrịa ndị ahụ na-ebi ndụ na ahịhịa ndị na-ata ahịhịa, ndị nwere okpukpu kpụ ọkụ n'ọnụ na ndị na-ekpuchi.
Ọ bụrụ na karọt na-ada ka na-akụ mkpụrụ ahụ, ọ dị mkpa iji ọgwụ ndị na-eme ngwa ngwa: Actellic, Intavir, wdg.
Ọ bụrụ na e nwere wireworms, slugs, oke, ntụpọ ojii n'ahụ, dandruffs, shrews, ụmụ oke na saịtị gị, ha ga-agaghị echekwa sweet carrots.
N'ihe banyere ọrịa, carrots, nke dị na ya, enweghi ike igosi ọrịa. Oge nsogbu nwere ike ime n'ihi fomoz ma ọ bụ alternariosis. Ka o sina dị, nchịkọta dị mfe nke ihe ndina nwere ngwọta nke percent nke boroski ga-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa ndị dị otú ahụ site n'usoro nke ịdị ukwuu.
N'ime ọrịa ndị nwere ike ịnweta carrots kwesịrị ịkpọ chalcosporosis, powdery mildew, bacteriosis.
Carrots bụ ihe oriri dị mma, ebe ọ na-enye mmadụ ume, ịma mma, ike ma na-eme ka ọhụụ dị mma. Inwe ezigbo nri, ihe na-esi ísì ụtọ, mkpụrụ dị elu, nkwụsi ike na nlepụ anya na-elekọta, a na-ewere "Carnt" shantane ka ọ bụ otu n'ime ọdịdị dị mma nke ọdịbendị ha.
Chickens na-ebu obere àkwá: ihe kpatara ihe ị ga-eme
Mma Orlinka dị iche iche ma dị mma
Ụdị tomato dị iche iche - Spassky Tower F1
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Carrots "Shantane 2461": nkọwa na ịkọ ihe